Umenzi weArhente yaseTshayina kunye noMthengisi | BGT
Ummeli weFavouring inamavumba ahlukeneyo anokuthenjwa.
Isetyenziswa ngokubanzi kwiingxowa zeplastiki, iimveliso zeplastiki, iimveliso zerabha.
Inkqubo ye- Ummeli weFavouring inokusetyenziswa ngokubanzi kwiingxowa zeplastiki, iimveliso zeplastiki, iimveliso zerabha, iithoyi zeplastiki, iziqholo, izihlangu, iziponji, ubugcisa, izinto zangaphakathi emotweni, izinto zokubhala, izinto zokubhala, izinto zasendlini kunye nempilo, ubuhle kunye nenkqubo yokupakisha yezimonyo kwishishini leplastiki, yenza imveliso ngokwayo ibe ziimpawu ezizodwa ukuyenza ikhuphisane ngakumbi kwintengiso, kodwa ikwonyuse ukubakho kweemveliso zexabiso elongeziweyo.
Sinokubonelela ngeziqholo ezahlukeneyo ngolu hlobo lulandelayo:
Iindidi zeentyatyambo: Ijasmine, i-osmanthus enuka kamnandi, ivukile, i-lavender, i-vanilla, i-gardenia, iMagnolia, istrawberry njalo njalo.
Iindidi zeziqhamo: Ii-apile, iilamuni, amaqunube, iipesika, njalo njalo.
Abanye: Inyama yenkomo eyosiweyo, itshokholethi, iminti, incasa yobisi.
Phawula: Ixabiso liya kubonelelwa ngokweemfuno zomthengi kwincasa.
Ngamaxabiso afanelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokuvelisa kunye nenkonzo elungileyo emva kokuthengisa, siphumelele ukudumisa abathengi bamanye amazwe '. Iimveliso zethu zithunyelwa eMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, eYurophu nakweminye imimandla.
Injongo yomdibaniso: Ukoneliseka kwabathengi yinjongo yethu, kwaye sinethemba lokuseka ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi ukuphuhlisa intengiso. Ukwakha okuqaqambileyo ngomso kunye! Inkampani yethu malunga “UBUME BOKUQALA BUNGOKUQALA NENZUZO UYAQINISEKA” njengengcamango yethu ekhokelayo. Siyathemba ukuseka uqhagamshelo ngokubanzi kwaye sisebenzisane nabathengi abangakumbi kuphuhliso kunye nezibonelelo. Siyabamkela abathengi abanomdla ukuba banxibelelane nathi.
Egqithileyo Ifektri yasimahla isampulu yokuqinisa inyukliya BT-9806 - Ummeli weNyukliya ye-PET BT-TW03
Okulandelayo: Ukucacisa iAgent BT-808